အိမ်မှာလည်းနေတယ်၊ ပိုက်ဆံကလည်း လက်ထဲအတန်အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်က တွေ့သမျှ လိုချင်စရာကောင်းတာလေးတွေကို ကလစ်ခ်လေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ မဝယ်ပါနဲ့။
ကဲအခုဆို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အားလုံးလည်း စီးပွားရေးတွေ တစ်စထက်တစ်စ ကြပ်တည်းကြလာပြီပေါ့။ ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း ဝင်ငွေကမမှန်၊ လစာတွေ အလျှော့ခံ၊ ကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း ကျောင်းမတက်ရတော့ အိမ်ကမုန့်ဖိုးမရ အစရှိသဖြင့် အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီလေ။ ဒါဆို… ဒီလိုကာလမျိုးမှာ ငွေကြေးကို ဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲသလဲ၊ သင့်ဆီမှာရှိပြီးသားငွေတွေ မဆုံးရှုံးရအောင် ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲသင့်လဲဆိုတာ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဘဏ်တွေကလည်း အတိုးနှုန်းတွေလျှော့နေတာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘဏ်မှာစုထားတာနဲ့ သင့်အိပ်ကပ်ထဲ သင်သိမ်းထားတာ နှစ်မျိုးအနက် ဘယ်အရာက သင့်ငွေကြေးတွေကို အလွယ်တကူ ကုန်ဆုံးစေသလဲ ခဏပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဖြေပေါ်လာမှာပေါ့။
အခုဆို အပြင်လည်းကောင်းကောင်းသွားလို့မရ၊ သွားရင်လည်း စိတ်ကမလုံမခြုံနဲ့ဖြစ်ဆိုတော့ ရှိသမျှလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံး အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာကြပြီ။ ဆိုတော့ကာ သင်ရော ဒီအခြေအနေမှာ ဘာလုပ်မလဲ?? သင့်ဆီမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး အတန်အသင့်ရှိလား? ဒါဆို သင်လည်း အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် သင့်တော်မယ့်ပစ္စည်းတွေရောင်းနိုင်တာပေါ့။ နောက်ပြီး ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်း သင်ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရမှာဆိုတော့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတအသစ်တွေရမှာပဲလေ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း အလားအလာကောင်းတဲ့အွန်လိုင်း စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရတာပေါ့။
၃။ သူများဆီက ပိုက်ဆံချေးတာကိုရှောင်ပါ။
Credit ကတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားသူဆီကပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေကြေးချေးယူတာကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါတွေအကုန်လုံးက သင့်နောက်ကို အတိုးနဲ့လိုက်လာလို့ပေါ့။ သင်က ဒီအခြေအနေမှာ ချေးငွေယူထားတယ်၊ ခဏတာအဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကပ်ကြီးပြီးသွားလို့ အရာအားလုံး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေချိန်မှာ သင်က အကြွေးတွေဆပ်နေရတုန်းဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး မရောက်ပါစေနဲ့။
အိမ်မှာလည်းနေတယ်၊ ပိုက်ဆံကလည်း လက်ထဲအတန်အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်က တွေ့သမျှ လိုချင်စရာကောင်းတာလေးတွေကို ကလစ်ခ်လေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ မဝယ်ပါနဲ့။ ဒါက သင့်အတွက် ဖြုန်းတီးမှုပါ။ အခုချိန်မှာ ငွေသားဆိုတဲ့အရာက အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတာနော်။ မနက်ဖြန်မှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်မလဲ မသိသေးတဲ့အချိန်မှာ သင့်အတွက် မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို စိတ်ထင်တိုင်း ငွေသုံးတာမျိုး မလုပ်ကြပါနဲ့။
ဘယ်လိုအက်ပလီကေးရှင်းလဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေအားလုံးကို ပြန်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းတွေပါ။ Google Store, App Store တို့မှာ ရှာကြည့်လို့ရပြီး Expense Manager တို့ ဘာတို့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ App ထဲမှာ သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ အသုံးစရိတ်တွေ၊ ဝင်ငွေတွေကို ပုံမှန်ဖြည့်သွင်းပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် သင်က ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာ မလိုအပ်ဘဲ ငွေကြေးသုံးစွဲနေလဲဆိုတာကို သိနိုင်မှာပါ။
မှန်ကန်တဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာက အခုကပ်ဘေးကာလထဲမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာမဆို အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အရာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုမျှဝေပေးခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးရင်း ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကို ကျော်လွှားလိုက်ပါ။
Source: theconversation, topuniversities